Imishini sanding: incazelo, izinhlobo, izici, imiyalelo kanye impendulo
Ithuluzi ahlabayo idinga njalo nangobuqotho ukuze sigcine ukusebenza. Ngesandla amadivayisi ukwenza eliphezulu ukugaya noma sanding imisebenzi engenakwenzeka. Isebenzisa imishini ekhethekile unikezwe izakhi olwalwenza ezifanele. Ngokuvamile, lezi imisebenzi ukusebenzisa imishini Emery ukuhlobisa ka enikeza esikhamweni sewayini. Kukhona amamodeli compact ukusetshenziswa ekhaya, futhi izinguqulo ezimbonini nge anda yokusebenza ukusebenza, ngakho ukhetha inketho efanelekayo akunzima.
ulwazi olujwayelekile mayelana imishini Emery
On idivayisi, imishini enjalo sifana bendabuko ahlabayo namasaha. Nokho, kunomehluko omkhulu izidumbu ukusebenza. Wathi whetstone ungase unikezwe amasondo ezahlukene olwalwenza izinkomba okusanhlamvu ukujiya kanye ubukhulu. Kuyinto lezi nemingcele zinquma ukufakwa utfolakala kuluhlobo kwemishini. Lombuthano kanye nomkhakha izici imisebenzi engaphansi, okuyinto ongenza iyunithi. Ngokwesibonelo, ukugaya nokuhlanganisa umshini sanding unikezwa iribhoni okuncane, futhi ukwenza imimese ukusetshenziswa imodeli umnyuziki asekelayo akwazi ukugcina ukusebenza for machining anolaka.
Futhi-ke inenani kwamandla umshini, okuyinto kuhluka Watts 200 1000. Le nkomba kuthinta ikhono imishini ukwenza imisebenzi kanye nezinto ezahlukene. Ngokwesibonelo, ayanda amandla, ephumelela kakhudlwana kuyinto ekwelapheni imikhiqizo metal. Futhi ngakolunye uhlangothi, uma sihlelwe kuphela ekupheleni zokuhlobisa noma evele elingaphandle ukususa burrs kanye zamehlo amancane, futhi umthamo encane okwanele zingakapheli Watts 500.
Umehluko omkhulu phakathi kudivayisi mshini ukucushwa kwe-izakhi ahlabayo. Iyunithi kungenziwa ifakwe akwazi ukugcina ezimbili, noma inhlanganisela yakho disc kanye sanding ibhande. Njengomthetho, amakhosi ukufuna ekubonile inhlanganisela ukucubungula izakhi ukuthi imisebenzi ehlukene. Ngakho uma uhlela ukwenza elola ithuluzi kakhulu sikhubazekile noma entsha, isinyathelo sokuqala ingasetshenziswa, drive indawo kungaba ngemva kwalokho umsebenzi lwako ukugaya ibhande, ukuhlinzeka sekugcineni ebusweni kokuphothula esimweni elikhulu. Ezimweni eziningi, imishini Emery esihlose ilungiselelo perpendicular isihlobo yokusebenza isici sesibili. ukuhlelwa okunjalo, njengoba okuhlangenwe nakho ochwepheshe, iyona nenzuzo kakhulu ngokuya lula opharetha, futhi umphumela ngokuya izinga.
Ukwahlukaniswa main kusho division of imishini ku umlingisi we processing imisebenzi. Okuvame kakhulu iyunithi jikelele, amakhono tekusebentisa amandla okuyinto kwanele uhla egcwele imisebenzi ukugaywa. Futhi ajwayelekile emakhosini eziningi umshini ukugaya, okuyinto igxile ukucutshungulwa okusheshayo amathuluzi ensimbi. Ngu imishini ezikhethekile idingekile ukuze ngokugedla amayunithi, ngawo lokufeza eziyinkimbinkimbi ukucutshungulwa izifunda. Futhi umshini Emery-ukugaya libhekwa ngokuvumelana uhlobo ukufakwa. Izinhlobo ezimbili onobuhle zivamile - etafuleni kanye phansi. Inketho yokuqala iqembu isilinganiso izitshalo amandla yasendlini, okuyinto enze imisebenzi elula ukugaya nokuhlanganisa imimese. Floor modeli ukwakhiwa eziqine kakhudlwana, ube ukusebenza ephakeme ngokuvamile esetshenziswa izitshalo endaweni operation okuqhubekayo.
Cishe zonke nokusebenza ukugaya ezipholisha lwenziwa ngezigaba ezimbili. Okokuqala, opharetha kumele akha chamfer bushelelezi. Kubalulekile ukuthi emaphethelweni ukuthola abukhali, akabanga wentaba umugqa ukusha kanye Curves. Umsebenzi oyinhloko kulesigaba - ukwenza uthunge ebusweni ngohlangothi kwesokudla ukuze ukwakha elikhulu e izinga Ukuqhamuka. Lokhu kuvumela esigabeni sesibili ukwakha ukudla nge nemingcele ezidingekayo. Ngakho, esinyathelweni sesibili imishini Emery zisetshenziselwa nokuqalisa izinguquko. Lokhu ibangelwa elola ikhaba nokunikeza kuye nge nokucija kunesidingo. Ngaphezu kwalokho, ingxenye efanayo opharetha umcimbi aqede komnikelo abasele enqubeni yokwakha onqenqemeni. Lokhu kungase kube maholoholo, burrs, futhi ukushayisana ahlukahlukene okuyinto kuyaqedwa ngo besila etsheni revs ongaphakeme.
Service olunzulu ihlinzeka ukuhlaziywa okuphelele umshini nge wokubuyekeza loluphelele ukugxusha lobuchwepheshe. Ihlola isimo se-motor, kanye izingxenye ahlobene izingxenye. ukunakekela okukhethekile banikezwe isimo umzimba futhi izingxenye zayo. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi amandla futhi lithembekile Umklamo amayunithi anjalo ngokuqondile kuthinte ukuphepha inqubo yokusebenza. Ngaphambi umsebenzi ngasinye sibuyekezwe namasondo. Isimo ethangeni kulinganisiwe hhayi kuphela ukubukeka. amakhosi Professional ukuqalisa imishini Emery nge izindilinga eziyizicaba ulalele beat yobukhona babo. Eqinisweni, ukuhlaziywa kwezincwadi vibration anda, okuyinto zingase zibe Indlela ukushayisana emaphethelweni disc. Zokulungisa isimo, ungasebenzisa ipensela idayimane noma wokusika. La mathuluzi bahlanza ngemibuthano isivuno sisiningi kakhulu khona, futhi kanjalo sinciphise izinto ezihlukile ukujikeleza.
Umsebenzisi izibuyekezo imishini Emery
Nge Ukukhetha kahle umshini ngokoMthetho imisebenzi ayinikiwe ngabasebenzisi ezimweni eziningi kungenzeka ukuze athole imiphumela elindelekile. Ikakhulukazi abanikazi badumise yamandla aphezulu onobuhle. Imishini enjalo umuntu ulinganiselwe ongaphakeme amandla amayunithi futhi ngokuvamile zingasetshenziswa njengendlela art jikelele. Lezi lokubolekwa uyalandisa phansi Sanding umshini, ehlanganisa wonke nomkhakha we ukugaya nokuhlanganisa wokucwebezelisa imisebenzi. Yiqiniso, izindleko onobuhle ezifana impela high.
Ububanzi libanzi futhi kuhlanganisa imikhiqizo lemikhiqizo eminingi evamile emakethe ukwakhiwa. iziphakamiso Iningi lifanelwe ingatholakala emigqeni umkhiqizo Bosch, Makita, Metabo, futhi Hammer. Ngokuphathelene production ezifuywayo, kulesi sigaba kuveza izinkampani "Energomash", "Bison", "Interskol" nokunye. D. Izindleko kuyahlukahluka ngokwesilinganiso kusuka 1.5 kuya ku-7 ayizinkulungwane. Deda. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi sanding ithebula umshini, intengo zazo ingeqi 2 ayizinkulungwane. Deda., Cishe ukuze bakwazi ukunikeza ukusebenza ukugaya elula kuphela. Ukuze imimese sina kufanele sigxile imishini angaphandle kubiza phakathi eziyinkulungwane 4-5. Hlikihla.
imishini Emery kukhona uhlobo olandelanayo kakhulu imishini. Isimiso wokusebenza cishe ayikho indawo ukwethulwa zobuchwepheshe kanye izinhlelo ngisho ezenzakalelayo. Ngakho-ke, isiqondiso main lapho ethandwa kakhulu etafuleni umshini Sanding ethuthukisiwe, ukwenyusa ukuthembeka isakhiwo kanye nokunemba ukusebenza. Kuze kube yimanje, abakhiqizi basebenzisa ezingasho eliphezulu Alloys womshini amagobolondo ukuthuthukisa ukucushwa ephumelelayo obusebenzayo izitho indawo, kanye abasebenza zokuvikela. Nokho, kukhona ukukhuthazwa kanye Ergonomics. Izindlela zakamuva of imishini, isibonelo, kwakukhona Izilawuli ukukhanya ngokunethezeka.
Lisho ukuthini grinder zokhuni
Ithuluzi Kuqondile ngoba sokuprakthiza
Usizo lwabenza imisenenzi upende isifutho izibhamu Sata: Umhlahlandlela, izibuyekezo, izithombe
Combi kubhayela - design, ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Usizo ukudlula "Izitshalo vs. Zombies"
Anchovies: Kuyini lokhu? Ukupheka ulwandle kuKhesari isaladi
Cream Bustex ngokudayisa: Izibuyekezo
Incazelo birch izingane. Incazelo birch leaf
Meaning of igama elithi "ngembazo": ukuthi kuyini nokuthi kungani na? Yasungulwa
Lapho meteorite wawa waseChelyabinsk? Izithombe nemininingwane usendaweni meteorite ukuwa
Bhisikidi e pan: zokupheka, amathiphu, ukupheka isimiso
EChernobyl Engaqondakali: amaqiniso athakazelisayo mayelana indawo okungayi
Dugin Aleksandr: incazelo yomuntu